विज्ञापन गर्नुहोस् Martech Zone | Martech Zone
सबै क्षेत्रहरू आवश्यक!
नयाँ विज्ञापन सिर्जना गर्नुहोस्
तपाइँ तपाइँको विज्ञापन कहाँ देखाउन चाहानुहुन्छ?
डेस्कटपमा प्रदर्शित (१२००px चौडा २ 1200० px अग्लो)मोबाइलमा चित्रित (336 280px चौडा २ XNUMX० px लामो)ट्याब्लेटमा प्रदर्शित (768px चौडा २ 280० px अग्लो)
विज्ञापन वर्णन (80)
कार्य बटन (20)
विज्ञापन यूआरएल (255)
थम्बनेल: png, jpg, gif
जब तपाइँ विज्ञापन प्रदर्शन सुरू गर्न चाहनुहुन्छ?
बिलि model मोडल र सीमा प्रदर्शन छनौट गर्नुहोस्
मासिक reach०,००० भन्दा बढी व्यवसाय मालिकहरू, निर्णय निर्माताहरू, विपणन पेशेवरहरू, र बिक्री पेशेवरहरूको पहुँच।
हाम्रो आगंतुकहरु को .77.3 XNUMX.%% खोजी ईन्जिन नतीजाहरुबाट आउँछन्।
Machine०% अ with्ग्रेजीको साथ १०० भन्दा बढी भाषाहरूमा अनुवादित (मेशिन)।
दैनिक र साप्ताहिक ,30,000०,००० संलग्न ईमेल ग्राहकहरू।
संयुक्त सामाजिक मिडिया निम्नसँग 50,000०,००० भन्दा बढी अनुयायीहरू छन्।
हाम्रो आगन्तुकहरू अनुसन्धान गर्दै, पत्ता लगाउँदै, र उनीहरूको अर्को बिक्री र मार्केटिंग टेक्नोलोजी र सम्बन्धित रणनीतिहरू सिकिरहेका छन्। एनालिटिक्सले यसलाई शीर्ष रुचिहरूको रूपमा दर्ता गर्दछ:
विज्ञापन र मार्केटिंग सेवाहरू
व्यापार र उत्पादकता सफ्टवेयर
SEO र SEM सेवाहरू
.48.3 XNUMX..XNUMX% पुरुषहरू
Martech Zone स्वामित्व र द्वारा संचालित हो DK New Media, LLC, को एजेन्सी Douglas Karr। यदि तपाईं विस्तृत विश्लेषण रिपोर्टहरू चाहनुहुन्छ भने, कृपया मलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
वर्तमान विज्ञापन सेक्सन
फिचर गरिएको सेक्सन - यो सीधा हाम्रो नेभिगेसन र सूचना बारको तल मुख्य भाग हो र यो साइटको सबै लेखहरू र मुख्य पृष्ठहरूमा अवस्थित छ। त्यहाँ एक डेस्कटप र मोबाइल संस्करण उपलब्ध छ।
कस्टम प्रोग्राम चाहिन्छ?
हामी तपाईंको उपकरण, देश, कोटी, र मिति दायरामा आधारित कस्टम कार्यक्रमहरू पनि सिर्जना गर्न सक्दछौं। कृपया केहि विवरण प्रदान गर्नुहोस् ताकि हामी तपाईसँग यस बारे छलफल गर्न सक्दछौं। कृपया यो फारम प्रायोजित पोष्टहरूमा वा ब्याकलिंक अनुरोधहरूको लागि प्रयोग नगर्नुहोस्। तपाईंको अनुरोध मेटिने छ।